दलितका मुद्दा र सार्क: वालुवामा पानी ! | Nepaldalitinfo International
दलितका मुद्दा र सार्क: वालुवामा पानी !
सार्क सम्मेलनमा दलितका सवाल सम्वोधन हुनपर्छ भनेर केही पहल गरियो । गोरखापत्र दैनिकमा लेख पनि प्रकाशित भयो । तर, सार्कले यसपटक पनि दलितका मुद्दा सम्वोधन गर्न चाहेन । हाम्रो प्रयास वालुवामा पानी हाले जस्तै भयो । जेहोस, गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख जानकारीका लागि पोस्ट गरेको छु र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु ।
विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले स्थापनाको करिव तिन दशक टेकेको छ । यस अवधिमा १७ वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् भने १८ औं सम्मेलन आजै काठमाडौंमा सम्पन्न हुन गैरहेको छ । तर, क्षेत्रीय रुपमा रहेका विविध समस्याको समाधान गरी यस क्षेत्रका नागरिकको जीवन समृद्ध पार्र्नेे उद्देश्यसहित स्थापना भएको सार्कले यस क्षेत्रकोे गम्भीर र साझा समस्याको रुपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई अहिलेसम्म सम्वोधन गर्न सकेको छैन् । यो विषय न सार्कको वडापत्रमा समावेश छ न विभिन्न सम्झौता तथा अधिसन्धिहरुमा नै । हालसम्म सम्पन्न भएका शिखर सम्मेलनहरुमा पनि यो मुद्धालाई एजेन्डा वनाई छलफल गर्ने र घोषणापत्रमा समावेश गर्ने काम भएकोे छैन् । यस्तो महत्वपूर्ण फोरममा विश्वमान चित्रमा दक्षिण एशियालाई नै लज्जित पार्ने कुप्रथा अन्त्यका लागि पहल नहुनुु दुःखद विषय हो । त्यसैले सम्मेलनले यसतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय दलित ऐक्यवद्दता संजालले प्रकाशन गरेको दक्षिण एशियामा जातीय विभेद नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार यस क्षेत्रमा करिव २६ करोड जनता जातीय विभेदवाट पीडित छन् । उनीहरु मुल रुपमा गरिवी, वधुँवा मजदुरी, शोषण, वञ्चितिकरण, छुवाछुत, कुटपीट, नाकावन्दी, वहिस्कार जस्ता अमानवीय पीडा पनि भोग्न वाध्य छन् । यो समस्या सार्कका सवै सदस्य मुलुकहरुमा भए पनि नेपाल र भारतमा चर्को छ ।
यस्ता विभेदका कारण दक्षिण एशियाका दलित समुदायको राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको छ । उनीहरुको सामाजिक अवस्था पनि अन्य जातीको तुलनामा तल परेको छ भने शोषण र विभेदका कारण आर्थिक अवस्था पनि निकै दयनीय रहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वस्थ्य अवस्था पनि कमजोर रहेको छ । यि तथ्यहरुका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सार्कले यि सवालहरुको सम्वोधन गर्न जरुरी छ । अन्यथा दक्षिण एशियामा शान्ति र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन ।
अहिले सार्कको कार्यक्षेत्रमा गरिवी, कृषि तथा ग्रामिण विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, वातावरण तथा वन, विज्ञान, प्रविधि, मानविय विकास, जलस्रोत, उर्जा, आतंकवाद, महिला, वालवालिका तथा युवाका सवाल र व्यापार जस्ता विषयहरु पर्छन । सार्कका सवैजसो फोरममा सधै यिनै विषयमा छलफल र वहस हुँदै आएको छ । अहिले पनि सदस्य राष्ट्रहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुका वीचमा यिनै विषयमा छलफल शुरु भएको छ । तर, सार्क क्षेत्रकै साझा समस्या भएपनि छुवाछुतको मुद्धाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि शिखर सम्मेलनमा प्रवेश पाउने अवस्था देखिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको मस्यौदाले यही संकेत गर्दछ ।
सामरिक तथा रणनीतिक हिसावले विश्वमै विशेष महत्व राख्ने दक्षिण एशियाली क्षेत्र तथा विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारत समेत प्रभावित भएको यो मुद्दा किन सार्कको औपचारिक मञ्चमा छलफल हुँदैन ? के यसमा साझा पहल जरुरी छैन ? के यो समस्याको समाधान विना अन्तराष्ट्रिय जगतमा यस क्षेत्रको प्रतिष्ठा सम्भव छ ? के छुवाछुतको अन्त्य विना गरिवीको अन्त्य तथा यस क्षेत्रका जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउन सम्भव छ ? के यसको समाधान विना शान्ति, न्याय, समानता, मानवअधिकारको कल्पना गर्न सकिन्छ ? के छुवाछुतको अन्त्यविना सार्कको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरुको जवाफविना सार्क न प्रभावकारी वन्न सक्छ, न लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो सार्कको एजेन्डा त वन्न सकेन, सँगै यसलाई एजेन्डा वनाउनका लागि दलित समुदायको पनि ठोस पहल हुन सकेन । शासकवर्गले छुवाछुतलाई सार्कको एजेन्डा वनाएर अन्त्यको पहल नगर्नु स्वभाविक हो । तर, राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध दलित समुदायका नेताहरु तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु दुवै पक्षले यसलाई सार्कको एजेन्डा वनाउनका लागि ठोस पहल नगर्नु आश्चर्यको विषय हो । नेपाल र भारतको दलित आन्दोलन अलि वढी प्रभावकारी भएका कारण यिनै देशवाट पहल हुनुपर्ने हो । तर, हुन सकेको छैन् । दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाईअनुसार भारतले दलित शव्दको प्रयोग गर्न र यसलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउनका लागि अवरोध गर्ने गरेको छ । यसका साथै दलित समुदायका तर्फवाट पनि प्रयाप्त गृहकार्य र दवाव नपुगेका कारण यसले सार्कको मुद्दा वन्ने अवसर पाउन सकिरहेको छैन् ।
यसक्षेत्रमा पहिचान भएका माथिका समस्यावाट वढी प्रभावित हुने जनसंख्या दलितहरुकै भएको तथ्यहरुले देखाउँछन् । गरिवीवाट सवैभन्दा पीडित दलितहरुनै छन् भने महिला हिंसा, वेचविखनवाट प्रभावित पनि वढीमात्रामा दलित महिला छन् । कुपोषणवाट पीडित वालवालिका दलितकै छन भने वेरोजगार र अवसर नपाउने ठूलो जनसंख्या पनि दलित युवाकै छ । चाहे जलवायु परिवर्तनको असरवाट होस वा प्राकृतिक विपत्तिवाट, वढीमात्रामा प्रभावित हुने पनि दलितनै छन् । उनीहरुको जीवनमा छुवाछुतले पारेको वहुआयामिक असर त छँदैछ । न्युनतम मानवअधिकार र आत्मसम्मान गुमाएर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा जीवन निर्वाह गरेको ठूलो जनसंख्यालाई वेवास्ता गरेर दक्षिण एशियालाई साँच्चिकै समृद्ध वनाउन असम्भव छ ।
यसैले मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत ध्यान दिदै सार्कको वडापत्रमानै कुनैपनि नागरिकहरुलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत नगरिने र सवैलाई आत्मसम्मानका साथ वाँच्न पाउने अधिकार उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सामाजिक चार्टरमा पनि अविभेद, समावेशी सिद्धान्त र दलित समुदायको विकासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्कले खाद्य सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद, लागूपदार्थ, वेचविखन, वालकल्याण सम्वन्धी क्षेत्रीय अभिसन्धी तथा सम्झौता गरिसकेको छ भने अव, छुवाछुत विरुद्ध पनि अभिसन्धि जारी गर्न आवश्यक छ ।
यस्तै दलित अधिकारमा काम गर्ने क्षेत्रीय स्तरको साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा सार्कका सम्पूर्ण संयन्त्रमा दलित समुदायलाई अनिवार्य समावेशीकरण गर्ने जस्ता काम गर्न सकियो भने दलित समुदायका तमाम मुद्दा समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ । उपरोक्त मुद्दाहरुलाई जारी शिखर सम्मेलनमा एजेन्डा वनाई निर्णय गर्नुपर्दछ । अन्य कतिपय मुद्दा सार्कका बिभिन्न संयन्त्रमा हुने वहुपक्षिय तथा द्धिपक्षिय वैठकहरुमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जेहोस २६ करोड जनतालाई छुवाछुतवाट मुक्त गरी उनीहरुको जीवनलाई समृद्ध वनाउन सार्कले पहल गर्दा सदस्य राष्ट्रहरुलाई ठोस काम गर्न नैतिक दवाव हुने, एक आपसमा अनुभव आदानप्रदान हुने र काम गर्न सहज हुन्छ भने अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सार्कको सकारात्मक छवि निर्माण हुन सक्छ ।
By nepaldalitinfo International, on December 6, 2014 at 10:17 am, under Perspectives & Analysis. No Comments
« “सम्बन्ध” को न्यूयोर्कमा डिसेम्बर ६ तारिख हुने लोकार्पण समारोहमा निमन्त्रणा
रामबहादुर सुनारको दलित नेताहरुलाई खुल्ला पत्र »